Bit By Bit - အပြေးစမ်းသပ်ချက် - 4.5.1.2 သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှု Build
သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်ခြင်းအကုန်အကျဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင်လိုချင်သည့်စမ်းသပ်မှုဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကို enable ပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်၏ထိပ်ပေါ်မှာစမ်းသပ်ချက် overlaying အပြင်, သငျသညျလည်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမ်​​းသပ်မှုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်မှု၏အဓိကအားသာချက်ထိန်းချုပ်မှုသည် ဖြစ်. , သင်စမ်​​းသပ်မှုတည်ဆောက်နေသည်မှန်လျှင်, သင်ချင်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကုသဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား bespoke စမ်းသပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသဘာဝဖြစ်ပေါ်နေပတ်ဝန်းကျင်မှာစမ်းသပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းသီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်​​းသပ်မှုတည်ဆောက်ခြင်း၏အဓိကအားနည်းချက်များကြောင့်စျေးကြီးဖြစ်နှင့်သင်ဖန်တီးနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်နေစနစ်၏သရုပ်မှန်ရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါနိုငျသောဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမ်​​းသပ်မှုတည်ဆောက်သုတေသီများကလည်းသင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းများအတွက်ဗျူဟာရှိရမည်။ လက်ရှိစနစ်များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါသုတေသီများမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူတို့ရဲ့သင်တန်းသားများအားလက်တွေ့စမ်းသပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သုတေသီများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စမ်​​းသပ်မှုတည်ဆောက်သောအခါမူကား, သူတို့ကမှသင်တန်းသားများကိုရောက်စေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ထိုကဲ့သို့သောအမေဇုံစက်မှု Turk (MTurk) အဖြစ်န်ဆောင်မှုသုတေသီများက၎င်းတို့၏စမ်းသပ်မှုမှသင်တန်းသားများကိုရောက်စေဖို့အဆင်ပြေလမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
စိတ္တဇသီအိုရီစမ်းသပ်ဘို့ bespoke ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏သီလသရုပ်ဖော်ကြောင်းဥပမာတစျခု Gregory Huber, ရှေဟေးလ်နှင့်ဂါဗြေလ Lenz အားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုသည် (2012) ။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေး၏လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သောလက်တွေ့ကျတဲ့န့်အသတ်စူးစမ်း။ အစောပိုင်းကအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ပွဲ Non-စမ်းသပ်လေ့လာမှုများမဲဆန္ဒရှင်တိကျစွာလက်ရှိနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်, မဲဆန္ဒရှင်သုံးဘက်လိုက်မှုမှခံစားမှပေါ်လာ: 1) မကြာသေးမီအစားထက်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်; အပြောအဆို, ဘောင်, နှင့်စျေးကွက်အားဖြင့် 2) manipulatable; နှင့် 3) ထိုသို့သောဒေသဆိုင်ရာအားကစားအသင်း၏အောင်မြင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအဖြစ်လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ဖို့သက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ရပ်များ, ကလွှမ်းမိုး။ ဤသူတို့သည်အစောပိုင်းလေ့လာမှုများအတွက်, သို့သော်, ဒါကြောင့်ကိုမှန်ကန်ရှုပ်ထွေးရွေးကောက်ပွဲတွင်ဖြစ်ပျက်သမျှသောအခြားပစ္စည်းပစ္စယဤအချက်များမဆိုခွဲထုတ်ရန်ခက်ခဲခဲ့သည်။ ထိုကွောငျ့, Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များခွဲထုတ်နိုင်ရန်အတွက်အလွန်ရိုးရှင်းသောမဲပေးပတ်ဝန်းကျင်ကဖန်တီး, ပြီးတော့စမ်းသပ်ဤသုံးပါးဖြစ်နိုင်ခြေဘက်လိုက်မှု၏အသီးအသီးကိုလေ့လာ။
ငါကိုဖော်ပြရန်အဖြစ်စမ်းသပ် Set-up ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအလွန်အတုမြည်သွားပေမယ့်သရုပ်မှန်ဓာတ်ခွဲခန်းစတိုင်စမ်​​းသပ်ချက်အတွက်ရည်မှန်းချက်မဟုတျကွောငျးကိုအောကျမေ့နေသည်။ အဲဒီအစားပန်းတိုင်ရှင်းလင်းစွာသင်လေ့လာဖို့ကြိုးစားနေသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခွဲထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်, ဒီတင်းကျပ်စွာအထီးကျန်မှုတွေပိုပြီးသရုပ်မှန်နှင့်အတူလေ့လာမှုများအတွက်တခါတရံတွင်မဖြစ်နိုင်ပါ (Falk and Heckman 2009) ။ နောက်ထပ်, ဒီအထူးသဖြင့်အမှု၌, သုတေသီမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုထိရောက်စွာထို့နောက်သူတို့တစ်တွေပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး setting ကိုအတွက်ထိုသို့ပြုနိုင်မည်သွားကြသည်မဟုတ်, ဒီအလွန်အမင်းရိုးရှင်းသော setting ကိုအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်မနိုင်လျှင်စောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။
Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းဖို့အမေဇုံစက်မှု Turk (MTurk) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးပါဝင်သူအသိပေးခွင့်ပြုချက်ပေးထားနှင့်တစ်ဦးအတိုစမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူမသူမကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံသို့ကူးပြောင်းနိုင်တိုကင်ဝင်ငွေမှတစ်ဦးကို 32 ပတ်ပတ်လည်ဂိမ်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့ကွောငျးကြားပြောလေ၏။ ဂိမ်းရဲ့အစမှာ, အသီးအသီးပါဝင်သူသူမရဲ့အခမဲ့တိုကင်တစ်ခုစီကိုလှည့်လည်ပေးနှင့်အချို့သောခွဲဝေအခြားသူများထက်ပိုပြီးရက်ရက်ရောရောကြ၏မယ်လို့ထားတဲ့ "ခွဲဝေပေးခြင်း" တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းကြားပြောလေ၏။ ထို့ပြင်အသီးအသီးပါဝင်သူလည်းသူမကသူမ၏ခွဲဝေစောင့်ရှောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဂိမ်း၏ 16 ကြိမ်အပြီးအသစ်တစ်တာဝန်ပေးအပ်ခံရနေတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိသည်မယ်လို့ကြောင်းကြားပြောလေ၏။ သငျသညျ Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက '' သုတေသနဆိုင်ရာပန်းတိုင်များနှင့် ပတ်သက်. သိသောအရာကိုပေးသနား, သင်ခွဲဝေတဲ့အစိုးရကိုကိုယ်စားပြုသောနှင့်ဤရွေးချယ်စရာတစ်ဦးရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားပြုတယ်, ဒါပေမယ့်သင်တန်းသားများသုတေသန၏အထွေထွေဂိုးသတိထားမိကြဘူးကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ စုစုပေါင်းခုနှစ်, Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပတ်သက်. 8 မိနစ်ကိုယူတဲ့ task အတွက်အကြောင်း $ 1.25 ပေးချေခဲ့ကြသူအ ပတ်သက်. 4000 သင်တန်းသားများကိုခေါ်ယူခဲ့သည်။
အစောပိုင်းသုတေသနပြုချက်မှတွေ့ရှိချက်များကိုတဦးမဲဆန္ဒရှင်ထိုကဲ့သို့သောဒေသခံအားကစားအသင်းများ၏အောင်မြင်မှုနှင့်ရာသီဥတုအဖြစ်သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်ရှင်းလင်းစွာဖြစ်ကြောင်းရလဒ်များသည်ကလက်ရှိသမ္မတဆုချခြင်းနှင့်အပြစ်ပေးခဲ့ကွောငျးသတိရပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမဲပေးသင်တန်းသားများကိုသူတို့ရဲ့ setting ကိုအတွက်သက်သက်သာကျပန်းဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့, Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသူတို့ရဲ့စမ်းသပ်စနစ်တစ်ထီကဆက်ပြောသည်။ (ညာအခွဲဝေပေးခြင်းကိုအစားထိုးဖို့အခွင့်အလမ်းရှေ့တော်၌ဆိုလိုသည်မှာ,) 8 ပတ်ပတ်လည်သို့မဟုတ် 16 ပတ်ပတ်လည်ဖြစ်စေမှာသင်တန်းသားများကိုကျပန်းအချို့သော 5000 အချက်များအနိုင်ရခဲ့သည့်နေရာတွင်တစ်ဦးထီ၌ထားကြ၏, အခြို့0င်အချက်များအနိုင်ရရှိခဲ့နှင့်အချို့သော 5000 မှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဒီထီနိုင်ငံရေးသမားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်၏လွတ်လပ်သောကြောင်းကောင်းမကောင်းသတင်းတုရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာအထီသူတို့ရဲ့ခွဲဝေ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖို့သက်ဆိုင်တဲ့ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်သော်လည်း, ထိုထီ၏ရလဒ်ကိုဆဲသင်တန်းသားများကို '' ဆုံးဖြတ်ချက်များထိခိုက်။ အထီမှအကြိုးကြောင်းသင်တန်းသားများကိုသူတို့၏ခွဲဝေစောင့်ရှောက်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိ ရှိ. , အထီအစားထိုးဆုံးဖြတ်ချက်-ထက်ကပတ်ပတ်လည် 8 မှာဖြစ်ပျက်လာသောအခါ (ပုံ 4.14) မီကပတ်ပတ်လည် 16-ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်အခါဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအားကောင်းခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်, စက္ကူအတွက်အခြားစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုနှင့်အတူ, ပင်တစ်ရိုးရှင်းသော setting ကိုအတွက်, မဲဆန္ဒရှင်အခက်အခဲပညာရှိသဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချရှိသည်သောကောက်ချက်ချရန်မဲဆန္ဒရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အနာဂတ်သုတေသနလုပ်ငန်းထိခိုက်စေတဲ့ရလဒ် Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဦးဆောင်တဲ့ (Healy and Malhotra 2013) ။ Huber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များစမ်းသပ်မှု MTurk အတိအကျအလွန်တိကျတဲ့သီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဖို့ဓာတ်ခွဲခန်းစတိုင်စမ်​​းသပ်ချက်အဘို့အသင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းဖို့အသုံးပွုနိုငျကွောငျးဖျောပွ။ ဒါဟာအစသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမ်​​းသပ်ပတ်ဝန်းကျင်တည်ဆောက်ခြင်း၏တန်ဖိုးကိုပြသထားတယ်: ဤဖြစ်စဉ်အတိုင်းပင်မည်သည့်အခြား setting ကိုအတွက်ဒါသန့်ရှင်းမှုအထီးကျန်ခဲ့ကြနိုင်ပုံကိုစိတ်ကူးဖို့ခဲယဉ်းသည်။
ပုံ 4,14: ကနေရလာဒ် Huber, Hill, and Lenz (2012) ။ အထီမှအကြိုးကြောင်းသင်တန်းသားများကိုသူတို့၏ခွဲဝေပေးခြင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိ ရှိ. , အထီအစားထိုးဆုံးဖြတ်ချက်-ထက်ကပတ်ပတ်လည် 8 မှာဖြစ်ပျက်လာသောအခါရှေ့တော်၌လှည့်လည် 16-ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်အခါဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအားကောင်းခဲ့သည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းကဲ့သို့စမ်းသပ်တည်ဆောက်အပြင်, သုတေသီများလည်းပိုပြီးလယ်ပြင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏စမ်းသပ်ချက်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Centola (2010) အမူအကျင့်များပြန့်ပွားအပေါ်လူမှုကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့သုတေသနမေးခွန်းကွဲပြားခြားနားသောလူမှုကွန်ယက်အဆောက်အဦများခဲ့ပေမယ့်မဟုတ်ရင်ချွတ်စွပ်အရွယ်အစားဖြစ်ကြောင်းလူဦးရေအတွက်ဖြန့်တူညီတဲ့အပြုအမူစောငျ့ရှောကျဖို့သူ့ကိုလိုအပ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာ bespoke, ထုံးစံ-built စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူရှိ၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Centola တဲ့ web-based ကနျြးမာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Centola ကနျြးမာရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာကြော်ငြာနှင့်အတူ ပတ်သက်. 1500 သင်တန်းသားများကိုခေါ်ယူခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုအွန်လိုင်းမှရပ်ရွာသောကျန်းမာရေးလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်မှာရောက်တုန်းက Network-သူတို့သိရှိခွင့်ပြုချက်ပေးထားပြီးတော့ "ကနျြးမာသူငယ်ချင်းများ။ " တာဝန်ကျသောကြောင့် Centola သူမတူညီတဲ့အတွက်အတူတကွကွဲပြားခြားနားသောလူမှုကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖုံးအုပျနိုငျခဲ့သည်ဤကနျြးမာရေးလုပ်သူများတာဝန်ပေးအပ်လမ်း အုပ်စုများ။ အချို့သောအုပ်စုများ (လူတိုင်းချိတ်ဆက်ခံရဖို့အညီအမျှဖွယ်ရှိရှိရာ) ကျပန်းကွန်ရက်များရှိသည်ဖို့ built ခဲ့ကြသည်များနှင့်အခြားအုပ်စုများ (connections ကိုပိုပြီးပြည်တွင်းဖြစ်သိပ်သည်းနေသော) ကွန်ရက်များပြွတ်ကြတညျဆောကျခဲ့သညျ။ ထို့နောက် Centola စီ network သို့အပိုဆောင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသစ်တစ်ခုဝက်ဘ်ဆိုက်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့အခွင့်အလမ်းအသစ်တခုအပြုအမူမိတ်ဆက်ပေးသည်။ မည်သူမဆိုဒီ site အသစ်တက်သည်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့အခါတိုင်းသူမရဲ့ကျန်းမာရေးကိုသူငယ်ချင်းများ၏ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအပြုအမူကြေညာအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Centola အကျပန်းကွန်ယက်ကိုထက်ပြွတ်ကွန်ယက်ကို, အခြို့လက်ရှိသီအိုရီဆနျ့ကငျြခဲ့တဲ့တွေ့ရှိချက်ထဲမှာနောက်ထပ်နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်-ဖြန့်ဘို့အသောဤအပြုအမူ-လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ-up ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယေဘုယျအားသင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်​​းသပ်မှုတည်ဆောက်ခြင်းသင်အများကြီးပိုပြီးထိန်းချုပ်ပေးသည်; သင်တို့ကိုလေ့လာဖို့လိုချင်တာတွေခွဲထုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်ဆောက်ရန်သင့်အားနိုင်ပါတယ်။ ဤစမ်းသပ်ချက်၏ဖြစ်ဖြစ်တစ်ပြီးသားရှိပြီးသားပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြနိုင်ပုံကိုစိတ်ကူးဖို့ခဲယဉ်းသည်။ ထို့ပြင်သင့်ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကတည်ဆောက်ရှိပြီးသားစနစ်တွေအတွက်စမ်းသပ်ပတ်ပတ်လည်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများလျော့နည်းစေပါသည်။ စုဆောင်းရေးသင်တန်းသားများနှင့်သရုပ်မှန်အကြောင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ: သင်သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်​​းသပ်မှုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ, သို့သော်, သငျသညျဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်အတွက်ကြုံတွေ့ကြသည်ပြဿနာတွေအများအပြားသို့ပြေး။ ဤဥပမာကိုပြသသည်အတိုင်း, စမ်းသပ်ချက် (ထိုကဲ့သို့သောသဖြင့်မဲပေး၏လေ့လာမှုအဖြစ်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှအထိနိုင်ပေမဲ့နောက်ဆုံးကျဘက်ကို, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်အကုန်အကျနှင့်အချိန်ကုန်စေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် Huber, Hill, and Lenz (2012) ) မှ (ထိုကဲ့သို့သောအားဖြင့်ကွန်ရက်နှင့်ဘယ်လိုကူးစက်၏လေ့လာမှုအဖြစ်အတော်လေးရှုပ်ထွေးပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ Centola (2010) ) ။